Mavericks OS efa mihazakazaka amin'ny 40 isan-jato ny Apple Macs - News Fitsipika
Mavericks OS efa mihazakazaka amin'ny 40 isan-jato ny Apple Macs
APPLE NY OS X MAVERICKS rafitra fandidiana (NY) izao nihazakazaka tamin'ny 40 isan-jato ny Macs, ny tatitra avy amin'ny dokam-barotra anaty aterineto tambajotra Chitika efa nilaza.
Ny mafy nijery am-polony tapitrisa ny OS X-mifototra dokambarotra fahatsapana ao amin'ny tambajotra eo 17 Martsa sy 23 Diabe ho tonga izany famaranana, milaza fa ny rehetra, ny dikan ny Apple misy ny Mac rindrambaiko, anisan'izany ny zokiolona toy ny Mac OS dikan X 10.8 Mountain Liona sy Mac OS X 10.7 Lion, 40 isan-jato ny Malagasy fifamoivoizana avy Mac OS X 10.9 Mavericks.
Apple Mavericks nolanian'ny 40 isan-jaton'ny mpampiasa Mac rehetra
Apple namoaka ny Mac OS X 10.9 Mavericks OS vao dimy volana lasa izay, ary gaga ireo mpampiasa amin'ny alalan'ny fanaovana azy io ho toy ny afaka Download. Azo inoana fa ny tsy fisian'ny tenifototra ny vidiny no tompon'andraikitra noho ny fahombiazana eo anatin'ny fotoana fohy.
By fampitahana, ny ankamaroan'ny mpampiasa Windows no mihazakazaka antitra dikan-. Araka ny Febroary 2014 by MediaWiki avy amin'ny Net Applications, ihany 11 isan-jato ny milina ny Microsoft OS dia mihazakazaka Windows 8, amin'ny 47 isan-jato ny mpampiasa favoring Windows 7 ary ny whopping 30 isan-jato Windows XP mamikitra, izay no efa akaiky ho sokafana.
Microsoft efa nanandrana ny karazana fitaka ny handresy lahatra ny mpampiasa XP mba hanatsarana ny vaovao dikan-Windows, anisan'izany ny fampitandremana ny ratsy dia ratsy fiarovana vokatry ny mifikitra amin'ny 12 taona rafitra sy ny fanatitra hohanina fihenam-bidy amin'ny Windows vaovao fitaovana. Angamba manao ny OS Apple hanatsarana maimaim-poana tahaka ny nataon'i, no hendry kokoa tetikady.
Apple ihany koa ny namoaka ny Mac OS X 10.9.1 vaovao farany tamin'ny Desambra, fa izay tsy hamonjy na inona na inona tena mampientam-po, tahaka ny nanatitra ny ankamaroany fanamboarana sy ny bibikely madinika tweaks.
Mac OS X 10.9.1 nitondra “nohatsaraina fanohanana Gmail ao amin'ny OS X Mail, sy fanamboarana ny mpampiasa amin'ny toe-javatra fanao Gmail” ary koa ny fanatsarana ny azo itokisana ny Smart Mailboxes sy hikaroka amin'ny Mail.
Ny Mavericks raikitra ihany koa ny vaovao farany ny olana izay nijanona Voiceover avy amin'ny famakiana avy sazy izay ao emoji. Fanamboarana hafa dia ahitana vaovao farany amin'ny iLife sy ny iWork fampiharana izany izy ireo vaovao farany amin'ny tsy-English rafitra, ary ny vahaolana ho an'ny olana iray izay nanakana ny vondrona Contact anarany populating ny adiresy an-tsaha. M
Repost.Us – Republish ity Article
Ity lahatsoratra ity, ny mpilaza vaovao avy amin'ny The manontany ary nandefa eto nahazoana alalana.
20391	0 Mac, Macintosh, Maverick, Rafitra fikirakirana, OS X
← Gay mpivady hanam-bady ho an'ny fotoana voalohany tany Angletera sy Pays de Galles Zuckerberg miasa amin'ny Wifi drôna ho an'ny faritra lavitra →